प्रचण्डले भने-: म प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन ! मेरो लागि देउवा जि केही हैन ? – News21Nepal
प्रचण्डले भने-: म प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन ! मेरो लागि देउवा जि केही हैन ?
८ मंसिर, धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू अहिले प्रधानमन्त्री पदमा नभए पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा कम नभएको बताएका छन् ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन उदघाटन कार्यक्रममा प्रचण्डले बुधबार सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘हुन त अहिले म प्रधानमन्त्री छैन । तर प्रधानमन्त्रीभन्दा कम पनि छैन ।’
‘मैले भनेको नमान्दा ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि महोत्तरीमा लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै प्रचण्डले अन्य प्रदेशमा पनि त्यस्तै कामको थालनी गर्ने आश्वासन दिए । ‘भर्खरै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हाम्रो बनेपछि महोत्तरी जिल्लामा लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । अब पश्चिम, मध्य, पूर्व सबैतिर एकैसाथ लालपूर्जा वितरण गर्न सकिने छ,’ प्रचण्डले भने । उनले कैलाली जिल्लाको विकासका लागि पनि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
Tags: प्रचण्डले भने-: म प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन ! मेरो लागि देउवा जि केही हैन ?
Previous प्रचण्डले फेरि चाले यस्तो आत्मघा’ती कदम, अब के होला यसको परिणाम ?
Next बजेट र बजेट प्रणाली, अनि पुजिबजार स’मस्याग्र’स्त अवस्थामा छ : अर्थमन्त्री शर्मा..?